Sawir cusub oo ah noocyada soo-gaadhista iPhone 7 | Wararka IPhone
48 saac kadib ayaa soo muuqan doona sawirradii ugu horreeyay ee Noocyada bandhigga ee iPhone 7 Iyo iPhone 7 Plus sawir kale ayaa u muuqday oo muujinaya afar iPhone 7s, midab kasta oo midabka hadda jira, iPhone 6s, laga heli karo. Sawirka oo soo muuqday Talaadadii lasoo dhaafay waxaan ku aragnay wax aan si fiican u habooneen: Moodhkan iPhone 7 4.7-inch ah wuxuu lahaa giraanta ilaalisa kaamirada markii dhamaan macluumaadka ilaa hada la helay ay xaqiijinayaan in giraanta noocaas ah aysan jiri doonin.
Sawirka in way muuqatay maanta, via Meel Kale (OnLeaks), waxay muujineysaa afar iPhone 7 soo-gaadhis ah oo aan sii lahayn giraanta aan soo sheegnay. Taas bedelkeeda iyo sida ay ku andacoonayaan dhammaan wararka xanta ah iyo xatooyada, waxay noqoneysaa kiiska qalloocan aaggaas iyo midka sameysmaya waxa beddelaya giraanta biraha ee ku jirta iPhone 6 iyo iPhone 6s.
Qaabab badan oo iPhone 7 ah oo soo-gaadhis ah
Xanta dhawan soo baxday ayaa sheegtay in taleefanka casriga ah ee Apple soo socda uu ku imaan doono a cirro badan oo mugdi ah marka loo eego midka jira ee moodooyinka hadda jira, laakiin "cirro madow" cirro laguma arko muuqaalkii hore. Miyuu kani meesha ka saarayaa suurtagalnimadaas si rasmi ah? Aniga aragtidayda, maya. Sannadkii hore waxaan ogaanay inay jiri doonaan iPhone 6s oo ku jira dahab kor u kacay muddo dheer ka hor intaan la bilaabin, laakiin haddii aan si sax ah u xasuusto, ma arki karno sida midabka saxda ahi u eg yahay illaa maalinta la soo bandhigayo (ama waxyar ka hor).
Waxa ii muuqda ceeb aniga ayaa ah in uu jiro hal sawir oo kaliya mana na tusayo dhanka bidix ee iPhone 7 oo ah 4.7-inji. Habka bandhigga ee iPhone 7 Plus ma laha badal uu qalabka ku dhajiyo dhawaq, wax shakhsiyan u muuqda fikrad xun. Wax kasta oo kale, sawirku ma muujinayo wax gaar ah, iyadoo kamaraddu ka weyn tahay kana sii ballaadhan tahay ta iPhone 6s iyo khadadka anteenooyinka oo keliya dusha iyo hoose ee qalabka.
Shakhsiyan, anigoo tixgelinaya inaan jeclahay naqshadda iPhone 6, waxaan u maleynayaa in nashqadaynta iPhone 7 ay tahay wixii ay ahayd inay billaabaan 2 sano ka hor, taas oo ah, isla naqshadda laakiin leh faahfaahinta ugu badan. Maxay kula tahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 7 » Sawir cusub oo ah noocyada bandhigga ee iPhone 7
Waa maxay sababta heck ay u yihiin xargaha anteeno isku midab ah guryaha? Waa maxay nooca maskax la’aanta ah ee ku dhacday inuu ka dhigo cadaan?
Waxa foolxun waxay umuuqdaan koofiyad duug ah
Sida had iyo jeer, Apple waxay ka xishoodaan fikradaha macaamiishooda maxaa yeelay waxay hubaan in had iyo jeer ay jiraan nacasyo iibsada alaabooyin isku mid ah oo argagax leh sida iPhone 7kan illaa hal maalin